क्यानडामा सन्दीपको एकपछि अर्को गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी: गए रातिको खेलमा पनि सन्दीप धारिलो बलिङ
असार २५, २०७५ BNNTV
एजेन्सी – अहिले क्यानाडामा जारी ग्लोबल क्यानडा टी – २० किर्केटमा सहभागी भएर खेलीरहेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने एकपछि अर्को गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
हिजो आइतबार राति मोन्ट्रोरियल टाइगर्सबाट चौथो खेल खेलेका सन्दीपले टोरोन्टो नेशनलविरुद्ध ४ ओभर बलिङ गर्दै ३४ रन दिएर २ विकेट हात परे। उनले अहिले सम्म यस प्रतियोगितामा ४ खेलमा ५ विकेट लिई सकेका छन्। हिजो भएकोप खेलमा सन्दीपको टोली मोन्ट्रोरियलले दिएको १ सय ७७ रनको लक्ष्य टोरोन्टो नेशनल्सले अन्तिम बलमा ९ विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। यससंगै सन्दीपको टोली मोन्ट्रोरियलको यो चौथो हार हो।
यसअघि सन्दिपले गत बुधबार भएको तस्रो खेलमा सन्दीपले निकै धारिलो बलिङ गर्दै आफ्नो टोलीलाई पहिलो जित दिलाएका थिए। मोन्ट्रोरियल टाईगर्ससँग इडमोन्टन रोयल्स १५ रनले पराजित भएको थियो। त्यस खेलमा संफ\_दीपले आफ्नो ४ ओभेको स्पेल बलिङ गर्दै १ ओभर मडेन सहित १९ रङ खर्चेर १ विकेट लिएका थिए।
त्यस्तै दोस्रो खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै १ ओभर मेडन राखेका १९ रनमात्रै खर्चेर १ विकेट लिएका थिए। पहिलो खेलमा भने केही महँगो भएका सन्दीपले ४ ओभरमा उनले ५७ रन खर्चदै १ विकेट लिएका थिए।
पाँच खेल खेलेको टोली एउटामा मात्रै जित पार्दै २ अंकका साथ पुछारमा रहेको छ।
प्रकाशित : सोमबार, असार २५, २०७५१२:५७
विश्वकप २०१८ मा कसको खेल उत्कृष्ट: तथ्यमा फ्रान्स, बेल्जियम, इंग्ल्यान्ड र क्रोएसिया
डिपिएल किर्केट: १३८ रनको लक्ष्य पाएको सि वाई सीले जवाफी ब्याटिंग गर्दै, यस्तो छ ताजा स्कोर
अपमान सहन नसकेर ‘इरानी मेस्सी’ सरदारले सन्यास लिएको खुलाशा: सुनाए यस्तो दुखलाग्दो घटना !
रियलसँग नौं वर्ष रहेका रोनाल्डोले रियललाई अन्फलो गरे !
‘क्रिस्टियानो भन्दा रोनाल्डो उत्कृष्ट’